Ifektri ye-Diesel generator, Abahlinzeki - Abakhiqizi bokudala bama China Diesel
IHufu AJ-C yochungechunge isebenzisa injini yeCummins. I-Hongfu AJ-C yochungechunge inokuthembela okuphezulu, intengo yokusebenzisa ishibhile, impilo esebenza isikhathi eside, ukulungiswa okulula. Kusetshenziswa kabanzi esiteshini samandla, ezakhiwo, amafektri, ezibhedlela nasembonini yezokumbiwa njll.
I-Hongfu AJ-DE yochungechunge isebenzisa injini yeDevz. Izinga elijwayelekile le-EU II, i-EUIII yomabili uchungechunge olujwayelekile lwemakethe ehlukile. Ububanzi be-22KVA-625KVA, ukusebenza kahle kokukhishwa kwamandla okuqhubekayo, ukulawulwa kokuphuma, izindleko zokusebenzisa uphethiloli, ukudlidliza njll.
I-Hongfu yamukela injini ye-Perkins futhi ikhiphe isethi yama-generator edizili ye-AJ-PE. Idizayini yochungechunge lwe-AJ-PE ukuhlinzeka ngomsebenzisi wethu osethwe nge-gen. Isixazululo esiphansi sokutshala imali / sokusebenza.
IHufu AJ-Y yochungechunge isebenzisa injini yaseYanmar eyangeniswa kwasekuqaleni evela eJapan.
Uchungechunge lweHongfu AJ-KB luthatha injini yeKubota engeniswa okokuqala eJapan.
Uchungechunge lweHongfu AJ-XC lwamukela injini ye-FAWDE. I-Hongfu AJ-XC yochungechunge inokuthembela okuphezulu, intengo yokusebenzisa ishibhile, impilo esebenza isikhathi eside, ukulungiswa okulula. Kusetshenziswa kabanzi esiteshini samandla, ezakhiwo, amafektri, ezibhedlela nasembonini yezokumbiwa njll.
Uchungechunge lweHongfu AJ-L lwamukela injini yeLovol enezici zesakhiwo esihlangene, umsindo ophansi, ukusetshenziswa kukaphethiloli okuphansi nokusebenza okuphezulu. Kusetshenziswa kabanzi endaweni yezokuxhumana, ujantshi, amaphrojekthi, imboni yezimayini njll.
I-Hongfu AJ-WP yochungechunge yamukela injini ye-Weichai. Uhla lwezinjini zeqembu le-Weichai lubandakanya izinhlobo ezimbili ze-Weichai neBaudouin. Uhla lwenjini ye-Weichai lusuka ku-23KW luye ku-400KW Baudouin brand eninge range lisuka ku-406kw liye ku-2450kw.
Hongfu AJ-YC uchungechunge usebenzisa injini YUCHAI esesikhundleni izici isakhiwo compact, umsindo ongaphakeme, ongaphakeme petrol kanye nokusebenza eliphezulu. Kusetshenziswa kabanzi endaweni yezokuxhumana, ujantshi, amaphrojekthi, imboni yezimayini njll.
Uchungechunge lwe-Hongfu AJ-YT luthatha injini ye-YTO enezici zesakhiwo esihlangene, umsindo ophansi, ukusetshenziswa kukaphethiloli okuphansi nokusebenza okuphezulu. Kusetshenziswa kabanzi endaweni yezokuxhumana, ujantshi, amaphrojekthi, imboni yezimayini njll.
I-Hongfu AJ-SC yochungechunge isebenzisa injini ye-SDEC enezici zesakhiwo compact, umsindo ophansi, ukusetshenziswa kaphethiloli okuphansi kanye nokusebenza okuphezulu. Kusetshenziswa kabanzi endaweni yezokuxhumana, ujantshi, amaphrojekthi, imboni yezimayini njll.
Hongfu AJ-R uchungechunge generator amasethi usebenzisa Y485BD, N4100, N4105, R6105, R6110 futhi 6D10D njll uchungechunge injini kukhiqizwa inkampani Ricardo injini e Weifang edolobheni. Izinjini zinamakhonsathi amahle kakhulu afaka inani elifanele, ukusetshenziswa kukawoyela ophansi, ukuthembeka okuphezulu, okulula ukugcinwa njll.
Amanani weGenerator, I-240kw Generator, IGenerator Encane, Dizeli Jenereta Enenjini Ye Kubota, Ukuthengisa Okusetshenzisiwe Kwesenzi, Izintengo ze-Diesel Generator,